नयाँ Graton रिसोर्ट र क्यासिनो वेबसाइट - Graton मा स्वागत छ
हामी हाम्रो नयाँ वेबसाइट को शुरूआत घोषणा गर्न धेरै उत्साहित छौं! यस वर्षको अधिकताका लागि हामी कडा मिहिनेतका साथ टुम मुन रिमेम्पमा काम गर्दैछौं जुन साइटले हामीलाई पहिलेभन्दा अझ राम्रो प्रतिनिधित्व गर्ने बनाउने प्रयास गर्छ, जबकि सबै भन्दा राम्रो अनुभव सम्भव सबैलाई प्रदान गर्ने प्रस्ताव पनि। तपाईंले देख्नु भएको हुन सक्छ कि हाम्रो वेबसाईट एकदम अलि फरक देखिन्छ। हामी यस्तो डिजाइन चाहान्छौं जुन ग्रेटोन रिसोर्ट र क्यासिनोले प्रस्ताव गरेको मजा र स्वाद क्याप्चर गर्दछ, र हामीले महसुस गर्छौं कि हामीले त्यसलाई चाहानु भए जस्तो बनायौं।
अधिक सुरुचिपूर्ण र रंगीन हुनुको शीर्षमा, साइट पनि अधिक कार्यशील छ। हामी आफ्नो साइट को उपयोग को लागी सजीलो को लागी प्रयोग गर्न सक्दछौं हामी यसलाई सकेसम्म बनाउन सक्छौं, एक इन्टरफेस को प्रस्ताव जब मोबाइल उपयोग को लागी अनुकूलित छ र हाम्रो वेब अनुभव को लागी अर्को स्तरमा लगिन्छ। हामीसँग हामीसँग बढ्नको लागि बनाइएको केहि चाहिएको थियो। त्यो दिमागमा राख्दै, हामीसँग वास्तवमा धेरै नयाँ सुविधाहरू छन् जुन निकट भविष्यमा आउँदैछ। हामी आउँदो महिनाहरूमा उनीहरूको बारेमा बताउन हामी कुर्दैनौं। यस बीचमा, हामीसँग केहि नयाँ सुविधाहरू छन् जुन अहिले यहाँ छन्:
हाम्रो होस्टिंग टीमको आफ्नै समर्पित अवतरण पृष्ठ रहेको छ जहाँ तपाईं हाम्रो टीमको सदस्यहरूको बारेमा जान्न र जान्न सक्नुहुनेछ।
हाम्रो स्पा र सलोन पृष्ठ, वा बैठकहरू र घटनाहरू जस्ता पृष्ठहरूले अब तपाईंलाई सीधै बुकि forको लागि ती टोलीहरू समक्ष पुग्न अनुमति दिनेछ, तपाइँलाई त्यहाँ पुग्ने ठाउँमा पुग्नुहोस् जहाँ तपाईं छिटो जान चाहनुहुन्छ र हामीसँग पहिले जस्तो कुराकानी गर्न पहिले जति सजिलो भएको थियो।
हाम्रो प्रत्येक मुख्य रेस्टुरेन्टहरूको बारेमा राम्ररी डिजाइन गरिएको पृष्ठहरू, तपाईको बारेमा के जान्न चाहानुहुन्छ भन्ने पत्ता लगाउन पहिले भन्दा पहिले सजिलो बनाउँदछ।
आगामी घटनाहरूमा थप विवरण प्राप्त गर्नुहोस्।
बस कार्यक्रम र यातायात लेआउट नेविगेट गर्न धेरै सजिलो।
अब हामीसँग एक विस्तृत FAQ छ जसले रिसोर्टको प्रत्येक क्षेत्रको बारेमा शीर्षकहरूको विस्तृत श्रृंखला कभर गर्दछ। यदि तपाइँसँग प्रश्न छ भने, यो सुरू गर्नको लागि उत्तम स्थान हो, तर तपाइँ कुनै पनि समयमा हामीलाई कल गर्न स्वतन्त्र महसुस गर्न सक्नुहुनेछ।
Graton रिसोर्ट र क्यासिनो को हरेक क्षेत्र को विवरण मा उच्च गुणवत्ता फोटो को एक प्रशस्तता।
हामीले प्रस्ताव गरेको सबै महान खेलहरूमा थप जानकारी।
Graton रिसोर्ट र क्यासिनो ब्लग जुन तपाइँ हालै पढिरहनु भएको छ!
र धेरै, धेरै!
माथि उल्लेख गरिए अनुसार, हामीसँग पाइपलाइनमा केहि अन्य ठूला सुविधाहरू छन् जुन साइटमा छिट्टै आउँदैछ। हामी निकट भविष्यमा अझ बढी विस्तारमा ती मध्ये छु। अहिले, हामी केहि चासोहरू बाहिर कल गर्न चाहान्छौं जुन तरीकाले हाम्रो साइटलाई पहिलेको मार्गबाट राखिएको थियो।
तपाइँ अब हाम्रो वेबसाइट को गेमि section्ग खण्ड मा Graton पुरस्कार को बारे मा जानकारी पाउनुहुनेछ।
हाम्रो भोजन र मनोरन्जन सेक्सनहरू संयोजन गरिएको छ। तपाइँ हाम्रो रेस्टुराँ र बजारका साथै केहि रमाइलो मनोरन्जन, हेडलाईनरहरू, यूएफसी र ल्याटिन शोहरू सबै गर्न पाउनुहुनेछ।
रिसोर्ट पृष्ठले हाम्रो होटेल, पूल, पूल साइड मेनू र हाम्रो स्पा र अन्य रिसोर्ट सुविधाहरूको बारेमा केही सामान्य जानकारी सम्बन्धी जानकारी राख्दछ।
हाम्रो बैठकहरू र घटनाक्रम पृष्ठमा उपलब्ध कोठाको प्रकारहरूको बारेमा मात्र जानकारी छैन, तर नयाँ घटना ग्यालरी पनि प्रस्तुत गर्दछ ताकि एक पटक हामी नियमित आधारमा घटनाहरू हुने फेरीमा फर्केपछि तपाईं विभिन्न दृश्यहरूको भीड देख्न सक्नुहुनेछ। प्रत्येक ठाउँ।
स्पा र सैलुन पृष्ठसँग अब हाम्रो लोयल्टी प्रोग्राम, सुविधाहरू र कुनै विशेष प्रचारहरू हाइलाइट गर्न समर्पित ठाउँ छ।
नयाँ के हो र के फरक छैन, हामी पनि भविष्यका लागि संक्षिप्त कुरा गर्न चाहन्छौं। ग्र्याटन रिसोर्ट र क्यासिनो ब्लगले रिसोर्टभरि अपडेटहरू, रेस्टुरेन्ट मेनूमा परिवर्तन, खुला स्थिति, र पक्कै नयाँ र क्लासिक खेलहरूको कभरेजमा शीर्षकहरू समावेश गर्दछ। यो तपाईको मनपर्ने ठाउँमा खेल्नको लागि अप-टु-डेट रहनको लागि उत्तम नयाँ तरिका हो!
कृपया हामी नयाँ पोस्ट कहिले बनाउँछौं भनेर जान्नको लागि कृपया हाम्रो सामाजिक मिडिया च्यानलहरूमा नजर राख्नुहोस्। हामी तपाईंलाई चाँडै भेट्ने आशा गर्दछौं।